पशुपतिनाथको मन्दिरमा १ सय ८ केजी सुनको जलहरी राखियो : RajdhaniDaily.com - पशुपतिनाथको मन्दिरमा १ सय ८ केजी सुनको जलहरी राखियो
Home Breaking News पशुपतिनाथको मन्दिरमा १ सय ८ केजी सुनको जलहरी राखियो
काठमाडौं । भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी (सुवर्ण पीठिका) राखिएको छ । बुधबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा १०८ केजी सुनको जलहरी राखिएको हो । गत महिना पशुपतिनाथमा पूजा गर्न जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुनको जलहरी राख्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार बुधबार सुनको जलहरी राखिएको हो ।
सुनको जलहरी राखेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले विशेष पूजा गरी फर्किएकी हुन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले जलहरी राख्ने काम सम्पन्न भएको र अब तीन दिनसम्म क्षमा पूजा गरिने जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक खतिवडाका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पहलमा राखिएको सो जलहरी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाने भक्तजनले पनि देख्न पाउनेछन् ।
जलहरी निर्माण कार्यमा करिब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमध्ये गत १२ माघमा पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले ३० करोड रुपैयाँ सरकारका तर्फबाट दिने घोषणा गरेका थिए । दाताबाट केही रकम प्राप्त भएको थियो भने बाँकी कोष आफैंले जुटाएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले जलहरी राखेपछि सो जलहरीको शिलालेख अनावरण गरेकी थिइन् । त्यसपछि सुनको जलहरीको प्राणप्रतिष्ठा गरिएको थियो । हाल यहाँ महाकुम्भ रुद्राभिषेक, सवा लाख दीप प्रज्ज्वलन र हवनसमेत भएको कोषले जनाएको छ । जलहरी राख्ने कामको मूलकर्ताका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, कर्ता र साक्षीको रूपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, मूलभट्ट गणेश भट्ट, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष एवं जलहरी निर्माण समितिका संयोजक डा. मिलनकुमार थापा र पुरातŒव विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम रहेका छन् ।
कोषका कोषाध्यक्ष थापाले जलहरी निर्माण कार्यमा करिब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए । जसमध्ये गत १२ माघमा पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले ३० करोड रुपैयाँ सरकारका तर्फबाट दिने घोषणा गरेका थिए । सोही रकमसँगै एक जना दाताले २ करोड रुपैयाँ, अर्का एक जना दाताले १ केजी सुन र भक्तजनबाट ४० लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो भने बाँकी रकम कोषले जुटाएको थियो । कोषका अनुसार यसअघि पशुपतिनाथ मन्दिरमा पहिलोपटक तामा, दोस्रोपटक चाँदीको राखिएकोमा यसपटक सुनको जलहरी राखिएको हो । हाल बजारमा कायम भएको सुनको भाउअनुसार यो जलहरी अहिलेसम्मकै धेरै महँगो भएको कोषको भनाइ छ ।
राजस्व नतिर्ने १२३ कम्पनीको जायजेथा जफत गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले लामो समयसम्म राजस्व रकम नबुझाउने विभिन्न पाँचतारे होटल, रिसोर्ट र निर्माणसँग सम्बन्धित १ सय २३ कम्पनी तथा व्यक्तिलाई अर्बौं रुपैयाँबराबरको रकम...
प्रेमांगी भन्छन्– नेपालले कोभिड–१९ को संक्रमणमा विजयी पाउँछ
भर्खरै Kumar Raut - March 31, 2020 0
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले अहिले विश्व नै अत्यन्त जटिल अवस्थामा छ । कोभिड–१९ को संक्रमण नफैलियोस् भनेर विश्वका थुप्रै मुलुक झै नेपालमा ...
आठ बर्षपछि अछाम – दैलेख जोड्ने मित्तेरी पुलको काम शुरु
प्रदेश Prem Shyangtan - February 18, 2020 0
दैलेख । दैलेखको आठविस नगरपालिका र अछाम जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको कर्णाली नदी बन्द रहेको मित्तेरी पुलको निर्माणधिनको काम पुनः शुरु...
संवैधानिक निकाय प्रमुख र पदाधिकारीबाटै राज्यकोषमा दोहन
प्रदेश ३ मधुजंग पाण्डे - March 16, 2021 0
मधुजंग पाण्डे, काठमाडौं । राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेर जनसेवा गर्ने महत्वपूर्ण दायित्वमा रहेका उच्च पदस्थले नै दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको दोहन गर्दै...
Breaking News Dhruba Lamsal - January 16, 2021 0
रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण भोलि हुने
ललितपुर । ‘वर्षा र सहकालका’ देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण शनिबार हुने भएको छ । मच्छिन्द्रनाथ गुठीसँग सम्बन्धित ज्योतिषीले शनिबार नागपञ्चमीका दिन दिउँसो १२ बजेर...
अस्पतालको फोहर व्यवस्थापन फितलो रोग निम्तिने जोखिम
Editor-Picks Kumar Raut - December 26, 2020 0
काठमाडौं । सरकारी अस्पतालबाट निस्कने स्वास्थ्य सेवाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । अस्पताललाई रोगमुक्त गराउने थलो हो । तर, तीनै अस्पतालबाट...
राजाधानी समाचारदाता - April 11, 2021